सरकारी लगानीले नीजि जग्गामा कोल्डस्टोरःमन्जुरीनामाका आधारमा कोल्डस्टोर बनाएको समितिको दाबी
तातोपानी गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित गौतमबाडा गाउँमा सरकारी लगानीबाट नीजि जग्गामा कोल्डस्टोर निर्माण र घेराबार गरिएको भन्दै बिवाद भएको छ । सांसद विकास कोषको १५ लाख लगानीमा निर्माण समितिका अध्यक्ष समेत रहेका सोहि गाउँका लक्ष्मी प्रसाद उपाध्यायले आफ्नो नीजि जग्गामा कोल्डस्टोर निर्माण गरेको भन्दै विवाद भएको हो ।
कोल्डस्टोर लगायत सांसद विकास कोषको १ करोड ३३ लाख लगानीमा निर्माण भएका लिफ्ट सिचाई, टयांकी,घेराबार र कोल्डस्टोर अनुगमन गर्न मंगलबार तातोपानी गाउँपालिका उपाध्यक्ष गंगादेवि उपाध्यायको नेतृत्वमा टोली गएको थियो ।
लिफ्ट सिचाई,ट्यांकी र घेराबारको अनुगमन सकेर कोल्डस्टोरका लागि टोली गौतमबाडा पुग्यो । नीजि जग्गामा कोल्ड स्टोर निर्माण,घेराबार भएको,निर्माण समिति गठन गर्दा खबरै नगरेको,एकलौटी गर्न खाजेको भन्दै स्थानीयले अनुगमन टोलीलाई सुनाए । लामो छलफल हुन नपाउदै केहिबेरमै स्थानीयले निर्माण समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रासद गौतम माथि मनपरी गरेको भन्दै एकाएक हातपात गरे । त्यसपश्चात स्थानीय बीच ढुंगामुडा हुँदा अबस्था तनाव ग्रस्त भएको भयो ।
सार्वजानिक जग्गा हुदाँ हुदै नीजि जग्गामा कोल्डस्टोर निर्माण किन गरियो ? तातोपानी गाउँपालिका ४ गौतमबाडाका स्थानीय हिमालय खत्रीले भन्नुभयो,“नीजि जग्गामा सरकारी संचरना बनाउँदा व्यक्तिकै हुने कुरा संविधानमा उल्लेख छ । सार्वजानिक जग्गा हुदा हुदै नियतबस नीजि जग्गामा निर्माण गरियो । कोल्डस्टोर वडा अथवा समुदायकै नाममा हुनुपर्ने हाम्रो माग छ ।”
सांसद विकास कोषको ६३ लाख लागतमा तातोपानीको २,४ र ६ वडाका नागरिकको ४ हजार ३ सय मिटर जग्गा घेराबार गरिएको छ । पहिला ६३ लाख बजेट भित्रै पर्ने गरी कोल्डस्टोर निर्माण गरेको आसपासको नीजि जग्गामै घेरबार गरियो । तर अहिले बिवाद भएपछि घेराबार आफ्नो नीजि लगानीमा भएको भन्न थालिएको समेत शिक्षक दिपक खत्रीले बताउनुभयो ।
सरकारी लगानीमा नीजि जग्गामा कोल्ड स्टोर र घेराबार निर्माण भएको र छलफलका लागि असार ७ गते तातोपानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई निवेदन दिएको उहाँको भनाई छ ।
तर निवेदन दिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि हाल सम्म सुनुवाई नगरेर लादेर लिन खोजेको उनको आरोप छ । उहाँले भन्नुभयो,“स्थानीयको बेवास्ता गर्दै समिति बनाउने,सार्वजानिक जग्गा हँुदाहुदै नीजि जग्गामा कोल्डस्टोर निर्माण गरेर स्थानीयलाई काम गर्न समेत दिएनन् ।”
कोल्डस्टोर सहकारीकै नाममा रहने मन्जुरीनामा
सांसद विकास कोषबाट निर्माण भएको कोल्डस्टोर मात्र नभई घेराबार,लिफ्ट सिचाई टंयाकी लगायतका संचरना ७ गाउँका स्थानीयको छलफल तथा परामर्शबाट निर्माण भएका छन् । कोल्डस्टोर निर्माण समितिका अध्यक्ष दिपक गौतमले भन्नुभयो,“विकासमा सामान्य विबाद हुन्छ । तर व्यक्तिगत रिस्सीविलाई जोडेर हातपात भयो । कोल्डस्टोर निर्माण तथा घेराबारमा कुनै नीजि स्वार्थ छैन् ।”
घेराबार मेरो नीजि लगानी हो । कोल्डस्टोर निर्माणका लागि मन्जुरीनामा भएको छ । अहिले सम्म भुक्तानी पनि लिएको नलिएको कोल्डस्टोर निर्माण समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले बताए ।
सांसद विकास कोषको १ करोड ३३ लाख निर्माण भएका संरचनाहरु व्यवस्थापनका लागि ‘चौर नमुना सामुहिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड’सहकारी स्थापना गरेका छौ । सहकारीको अध्यक्ष समेत रहेका उपाध्यायले भन्नुभयो,“कोल्डस्टोर १५ वर्ष सम्म सहकारीको नाममा हुने गरी मन्जुरी नामा गरेका छौ । कोल्डस्टोर सांसद विकास कोषको योजना भएकोले वडा अथवा कुनै निश्चित समुदायको नाममा हुदैन् । ७ गाउँका स्थानीतहको हितका लागि १५ वर्ष सम्म कोल्डस्टोर सहकारीकै माहतमा रहन्छ ।”
अधिबक्ता अनिता तिमिल्सीनाद्धारा लिखित मन्जुरीनामा पत्रमा तातोपानी २ का धन बहादुर बुढा र ६ का जक्ती प्रसाद न्यौपानेको साक्षीमा कोल्डस्टोर निर्माण समिति अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले तातोपानी २,४ र ६ वडाका किसानका लागि कोल्डस्टोर एकतले घर बनाउन १५ वर्षका लागि जग्गा दिने भनि २०७७ फागुन २० गते मन्जुरीनामा भएको छ ।
यदपी, कोस्डस्टोर १५ वर्ष सम्म सहकारीका नाममा हुने भनिएपनि मन्जुरीनामा पत्रमा भने सो कुरा उल्लेख छैन् । तर कोल्डस्टोर बनाउनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र पछि कुनै प्रकारको उजुरी नगर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
६३ लाखमा गरिएको घेराबार अन्तरर्गत नीजि जग्गामा घेराबार गरिएको भन्ने छ । त्यो भरम हो । आबश्यक परे नीजि लगानीको विलभरपाई देखाउछु । अहिले सम्म गाउँपालिकाबाट घेराबार कोल्डस्टोरको भुक्तानी पनि लिएको नलिएको समेत गौतमको भनाई छ । १५ वर्ष सम्म कोल्डस्टोर सहकारीकै नाममा हुने मन्जुरी नामा भएको छ । पछि संरचना नीजिकरण हुन सक्छ भन्ने शंका नगर्न सबैमा उहाँको आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद विकास कोषको योजना निर्माण गर्दा ७ गाउँका स्थानीयतहको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियमित छलफल गरेको र अहिले विरोध गर्ने पक्ष पनि सहभागी भएको बताउनुभयो । ७ गाउँका स्थानीय संग छलफल गरेर योजना निर्माण भएपछि कुनै निश्चित समुदायलाई सोध्नुको औचित्य नरहेको समेत उपाध्यायले उल्लेख गर्नुभयो ।
कोल्डस्टोर वरिपोरी भएको घेरबारा सरकारी लगानीबाट नभई नीजि लगानीबाटै भएको घेराबार समितिका अध्यक्ष धन बहादुर बुढाले बताउनुभयो ।
नीजि जग्गामा कोल्डस्टोर निर्माण गरेको विषयलाई लिएर गौतमबाडाका हिमालय खत्रीको टोलीले अनुगमन समिति माथि हातपात गरेको,गाली गलौज गरेको प्रति तातोपानी गाउँपालिकाले आपत्ती जनाएको छ ।
तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा अनुगमन समिति संयोजक गंगादेवि उपाध्यायद्धारा जारी विज्ञप्तीमा लेखीएको छ,“उपाध्यायलाई लछारपछार गरेको,गालीबेईजती गरेको र कर्मचारी जागिर खाईदिने समेतको धम्की दिएको र अनुगमन टोली माथिनै हमला गरेको घटना प्रति गम्भीर ध्नानकर्षण भएर त्यसको कानुनी उपचार खाजिने उल्लेख छ ।”
कोल्डस्टोरको विषयलाई कानुनी ढंगबाट समधान गर्न खोज्नु भन्दा पनि व्यक्तिगत सिस्सीवीलाई जोडेर कर्मचारीलाई हतोसाहित गर्नुका साथै आफुलाई लछारपछार गरेको,तथानाम गाली गलौज गर्नुका साथै ढुंगा समेत हानेका उपाध्यक्ष गंगादेवि उपाध्यायले बताउनुभयो ।
यसैबीच नेपाल प्रेस यूनियनका जिल्ला कार्यसमिति सदस्य जय प्रसाद गौतम माथि पनि हातपात भएको छ । कोल्डस्टोर लगायत गाउँका अन्य विषयवस्तुमा पनि निगरानी राख्यौ भन्ना बित्तिकै लेखा अडिटर हिमालय खत्रीले लगायत शिक्षक दिपक खत्री स्थानीय गोर बुढा, मुन बहादुर खत्री लगायतका व्यक्तिले आफुमाथि हातपात गरेको गौतमले बताउनुभयो ।
कोल्डस्टोर निर्माण सग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको र विवादका क्रममा सबै विषयवस्तुमा निरनन्तर खबरदारी र निगरानी गरौ भन्दा एकाएक हातपात भएको उहाँको भनाई छ । भने झडपका क्रममा तातोपानी २ का दिपक बुढा,विष्न बुढा पनि सामान्य घाईते भएका छन् ।
जग्गा पास नभई भुक्तानी हुदैन्
कोेल्ड स्टोर सार्वजानिक जग्गामै निर्माण हुनु पर्ने हो । तातोपानी गाउँपालिका लेखा अधिकृत मिलन बुढ्थापाले भने,“तर मन्जुरीनामा गरेर नीजि जग्गामा कोल्डस्टोर निर्माण भयो । मन्जुुरीनाकै आधारमा भुक्तानी त दिन मिल्छ । तर मनजुरीनामानै आधिकारिक हैन् । कुनैपनि बेला लिन सक्छन् ।
त्यसैले सहकारीका नाममा जग्गा पास नभए सम्म भुक्तानी हुदैन् ।”
बजेट फिर्ता जान सक्छ भनेर निकासा ल्याएर निर्माण समितिकै खातामा पैसा हालेर अहिले खाता रोक्का गरिएको समेत लेखाअधिकृत बुढ्थापाले जानकारी दिए । ९३ प्रतिशत कार्यसम्पन्न भइसकेको छ । तर सहकारीको नाममा जग्गा पास र प्रतिनिधि सभा सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले अनुुगमन नगरे सम्म रकम भुक्तानी नहुने उनको भनाई छ ।